सन्तुलन गुमाएका सभामुखले एमालेलाई पाठ पढाउने कि संसदबाट विदा लिने ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
सन्तुलन गुमाएका सभामुखले एमालेलाई पाठ पढाउने कि संसदबाट विदा लिने ?
२०७८ आश्विन २८, बिहीबार १९:१०:००
काठमाडौँ । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्को गतिरोध हटाउन नेकपा एमालेसँग संवाद गर्न तयार रहेको बताएका छन्। संसद चलाउनका लागि संवादको विकल्प नभएकाले सरोकारवाला सबै पक्ष संवादमा आउनुपर्ने उनको भनाइ बाहिर आएको छ ।
उनले संसदको गरिमा बढाउन सबैको भूमिका बराबर रहेको तर्क पनि अघि सारे । सकेसम्म आफूले तटस्थ बसेर निर्णय लिएको जकिर गर्दै सबैले आफूले गरेको कामको समीक्षा गरेर संवादमा आउनुपर्ने सल्लाह पनि उनले दिए।
संविधान र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा टेकेरै आफ्ना कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने आदर्श वाक्य उनले दोहोर्याएको पाइन्छ । यस क्रममा सापाकोटाले आफू मात्र ठीक, बाँकी सबै गलत भन्ने सन्देश दिन खोजेको बुझिन्छ । तर, यथार्थ के हो भने नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न नदिन माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जति हात छ, सभामुख सापकोटाको असन्तुलित भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
कुनै राजनीतिक दल, त्यसमा पनि नेताविशेषको मतियार सभामुख बन्न खोज्दा नै संसद निकै अप्रिय अवस्थाट गुज्रिरहेको छ । सभामुख सापकोटा त दलको नेताको मतियार त बने नै, एमसीसी प्रकरणमा उनी कुनै अमुक बाह्य शक्तिबाट पनि प्रभावित भएको देखियो । एमसीसीमा देखिएको भूराजनीतिक द्वन्द्वको सिधा असर संसदमा परेको छ । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन अझै पनि अस्थिर र ढलपलयुक्त नै छ । त्यसमा सभामुख सापकोटाले खेलेको भूमिका झनै शंकास्पद र आग्रहप्रेरित छ ।
हुन त पूर्ववर्ती सरकारलाई असफल बनाउन सापकोटाले सक्ने जति सबै उपाय अपनाएका हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको र अघि बढाउन चाहेका कुनै पनि एजेन्डा र विधेयकलाई उनले हरतरहले रोकेर राखे । विवाद समाधान गर्नु र द्वन्द्वरत पक्षहरुसँग संवादका लागि समन्वय गर्नु त परै जाओस्, नयाँनयाँ विवाद सिर्जना गरी संसदका शक्तिहरुबीच टकराव बढाउनमा उनको भूमिका केन्द्रित रह्यो । तत्कालीन नेकपाभित्रको शक्तिको टकरावमा समेत उनले प्रचण्डको पक्षपोषण गरे र ओलीलाई एकतर्फी रुपमा असहयोग मात्र गरिरह्े ।
ओलीलाई असफल बनाउने रणनीतिअन्तर्गत नै सापकोटाले एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुलमुनि लुकाए । नागरिकता कानुन, संघीय निजामती विधेयकलगायत महत्त्वूर्ण दस्तावेज सदनमा प्रस्तुत गर्नै दिएनन् । सदनभित्र मात्र होइन, संवैधानिक परिषदमा समेत उनी प्रचण्डका भरिया बनेर असहयोगको रणनीति अख्तियार गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी नै नभई नियुक्तिमा अवरोध गरे । उनको यो भूमिका ओलीलाई असहयोग मात्र थिएन, पदीय मर्यादाविपरीत, अनैतिक र संविधानकै अवमूल्यन गर्ने प्रकृतिको थियो ।
संवैधानिक पदहरु रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै गर्नुपर्ने नियुक्ति दुई–दुई वर्षसम्म गर्न नदिने उनै सापकोटा थिए । यस हिसाबले हेर्ने हो भने ओली सरकारलाई असहयोग गर्ने नाममा उनले नै सरकारलाई संविधान अतिक्रमण गर्ने वातावरण बनाएका थिए । यति मात्र होइन, अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपर्ने वातावरण बनाएर सरकारलाई र सबै संवैधानिक संस्थाहरुलाई समेत विवादको भुंग्रोमा पारिदिए ।
फेरि यही विषयलाई लिएर सापकोटा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा उजुरी गर्न पुगे । नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सभामुखले झगडियाका रुपमा चित्रित गरे । यही कारण प्रधानन्यायाधीशजस्तो तटस्थ र संवेदनशील संस्था समेत राजनीतिक विवादमा तानिन पुग्यो ।
यी सारा प्रकरणको दोषी कोही छ भने उनी सभामुख सापकोटा नै हुन् । यसका लागि उनलाई जस्तोसुकै सजाय गरे पनि कम हुन्छ । किनभने, उनकै कारण जनताले बनाएको संविधान धराशयी हुने अवस्था बनेको छ । जनताले अभूतपूर्वरुपमा दिएको जनमतयुक्त पार्टी छिन्नभिन्न भएको छ । योसँगै राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समुन्नतिको नेपाली सपनासमे धुजाधुजा भएको छ । के यसमा सापकोटाले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दैन ? खाली एमालेलाई पाठ पढाउन खोजेर मात्र हुन्छ ?
अझ पछिल्लो समय एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना आफ्ना नेतालाई गरेको कारवाहीसम्बन्धी सूचना लुकाएर दलीय व्यवस्थालाई नै सिध्याउने प्रपञ्चका मतियार सापकोटा बनेका छन् । प्रतिपक्षी दल, सरकार, संसद, संविधान, संवैधानिक अंगहरुविरुद्ध गरेको शृंखलाबद्ध घातका लागि सापकोटालाई एमालेले अभिनन्दन गर्नुपर्ने हो ? कि महाभियोग लगाएर डाँडो कटाउनुपर्ने हो ? आफै संविधानका उल्लंघनकर्ता, विवाद, द्वन्द्व र अराजकताका सर्जक, अनि आफै तथाकथित संवादका सूत्रधार भन्न सुहाउँछ ?
यदि संसदको गरिमा, मर्यादा र सभामुख नामक पदको सन्तुलनकारी गुणलाई अक्षुण्ण राख्ने हो भने सभामुखबाट सापकोटालाई हटाउनुपर्छ । सभामुको कुर्सीमा यस्ता धुन्धुकारी मानसिकताका व्यक्ति रहेसम्म नेपालको संसदीय व्यवस्था सही बाटोमा अघि बढ्न सक्ने छैन । कुनै व्यवस्थालाई सिध्याउनु छ भने त्यसैभित्र घुसपैठ गरेर सक्दो धेरै विवाद सिर्जना गर्ने, एउटा पक्षलाई मलजल र अर्कोलाई हेँलाहोचो गर्ने रणनीति माओवादीको पुरानै ध्वंसवादी चिन्तनको उपज हो । सापकोटा पनि त्यस धङधङीबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । यदि संसदीय व्यवस्था र हालको संविधान यस्ता जोगाउने हो भने कांग्रेसले पनि माओवादीसँगको गठबन्धन सक्दो चाँडो भत्काउनुपर्छ । त्यसो भएपछि सभामुखलाई विदा गर्न सकिनेछ । एमसीसी पारित गर्न सहज हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, माओवादीजस्तो विध्वंसकारी चिन्तन भएको पार्टीबाट शासित हुनुपर्ने नियतिबाट नेपालीले मुक्ति पाउनेछन् । यथाशीघ्र यो निर्णयमा पुग्न दुर्गा भवानीले कांग्रेसलाई सद्बुद्धि देओस् । बडादसैँको शुभ कामना ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल बर्खास...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कात्तिक तेस्रो साता ब्रिटेन जा...